सलमान भन्दा पनि सन्नी लियोनी बढी लोकप्रिय ! - Himalayan Kangaroo
सलमान भन्दा पनि सन्नी लियोनी बढी लोकप्रिय !
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ पुष २०७२, सोमबार ०७:४६ |
एजेन्सी । नायिका सन्नी लियोनीको सबैभन्दा चर्को विरोध भारतमै हुन्छ। यतिसम्म कि सन्नीले अश्लीलता फैलाएको र युवा पुस्तालाई भड्काएको भन्दै उनलाई देश निकाला गर्नुपर्ने आवाजसमेत ब्यक्त गर्दै आएका छन्।
तिनै भारतीय हुन्, इन्टरनेटमा सबैभन्दा धेरै सन्नीकै खोजी गर्छन्। भिडियो र तस्बिर हेरेर मनोरञ्जन लिन्छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सर्च इन्जिन गुगलले सन् २०१५ मा भारतमा सबैभन्दा धेरै खोजी सन्नीको भएको जनाएको छ।
पोर्न स्टार हुँदै हिन्दी फिल्ममा प्रवेश गरेकी सन्नी प्रायः चर्चामा हुने गर्छिन्। त्यसो त सन् २०१४ मा पनि भारतमा धेरै खोजिएको पात्र सन्नी नै भएकी थिइन्।
धेरै खोजिनेमध्ये दोस्रो व्यक्तिको रूपमा चयन भएका छन्, सलमान खान। गुगलमा खोजिने पात्रहरूमा सलमानभन्दा शाहरुख एक कदम पछाडि तेस्रो स्थानमा छन्। हिट एन्ड रनलगायतका अन्य केही विवादका कारण सलमानलाई धेरै खोजिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।
सन्नी लियोनीपछि धेरै खोजिएकी अर्की नायिका हुन्, कट्रिना कैफ।
सन् २०१५ सुरु हुनै लाग्दा रणवीर कपुरसँग मगनी गरेको भनेर चर्चामा आएकी कट्रिना वर्षभरि नै चर्चाको विषय बनिरहिन्। धेरै खोजिएका अन्य नायिकाको सूचीमा दीपिका पादुकोण तेस्रो, आलिया भट्ट चौथो र राधिका अप्टे पाँचौं स्थानमा छन्।
त्यस्तै, नायकको सूचीमा अक्षय कुमार तेस्रो, साहिद कपुर चौथो र ऋतिक रोशन पाँचौं स्थानमा छन्। धेरै खोजिएका अन्य नायिकामा क्रमशः अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, करिना कपुर, प्रियंका चोपडा र पुनम पाण्डे रहेका छन्।
धेरै खोजिने नायकको सूचीमा रणवीर कपुर, आमिर खान, बरुण धवन, अमिताभ बच्चन र अजय देवगण रहेका छन्। धेरै खोजिएका फिल्ममा बाहुबली, बजरंगी भाइजान, प्रेम रतन धन पायोलगायत रहेका छन्।
Previousएनसेल फेरी बेचियो,मूल्य १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ
Nextझण्डै ३ महिनापछि नाकाबन्दी खोल्न भारत सकरात्मक
एलिजालाई ऋषि धमला पत्नी नभन्न मिडियालाई रेखा थापाको आग्रह
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार ०६:४३
२५ मंसिर २०७५, मंगलवार १०:३७
आगामी वर्ष विवाह गर्ने तयारि भइरहेको प्रियंकाको खुलासा
३१ श्रावण २०७५, बिहीबार ०९:२६